Inona No Hanjo Ny Tanora Ao Kolombia Aorian’ny Ady? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 16:38 GMT
Pikantsarin'ny rakitsary Youtube “Mba hoan'ny Fiadanana sy ny Vintana hoan'ny Tanora Kolombiana”, navoakan'i Joe Espinosa Marmolejo ny 12 Aprily 2016Marmolejo..
Efa vonona daholo ny zavatra rehetra ho amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fandriampahalemana eo amin'ny Governemanta Kolombiana sy ny vondrona milisy Revolisionera mitam-piadiana ao Kolombia (FARC); izay havoaka ho ofisialy any amin'ny tanànan'i Kartazena ny 26 Septambra 2016. Dingana voalohany amin'ny hetsika izay hamaranana ny ady nandritra ny 52 taona io. Hotanterahana ny 02 Oktobra ny dingana faharoa, rehefa hanana ny teny farany amin'ny alalan'ny vata fandatsaham-bato mandritra ny fitsapankevi-bahoaka hanamafy ilay fifanarahana fandriampahalemana.
Ho an'ny Kolombiana ity dingana ity dia tena mahaliana tanteraka, indrindra fa toa tandindonin-doza ny hoavin'ny tanoran'ny firenena.
Ny fizarana faha-6 amin'ilay fifanarahana farany dia manoritsoritra ny fomba fanarahana maso sy fanamarinana ireo niharam-boina, ary ny rafitra momba ny fizarana sy fanarahana maso ny onitra avy amin'ny “Komity ho Fampiharana, Fanarahana maso sy Fanamarinana ny Fifanarahana Farany hisian'ny Fandriampahalemanea ary ny Fandravonana ny Disadisa. ” Ny dingana fanarahana maso dia sady fanatanterahana ny fifanarahana hisian'ny fandriampahalemana, no sady koa fitoavana hiantohana ny hiverenan'ireo Kolombiana nafindra toerana ho amin'ny taniny, hahazoan'izy ireo famatsiambola sy onitra noho ny fahavoazana, ary mba hahazoan'izy ireo fikarakarana ara-tsaina matianina.
Ahitana tanora sy ankizy ity dingana ity. Araka ny Rejisitr'Ireo Niharam-boina Fotsiny, nananika ny 4.007.136 ny isan'ny tanora tra-doza (manomboka 0 hatramin'ny 28 taona) noho ny vonoan'olona, famindràn-toerana ary ny fanjavonana.
Na azo aza anefa ny fandriampahalemana, dia mbola misy foana ratra maro misokatra. Tsy mbola afaka ny hiverina ireo nandeha niaina an-tsesitany. Tsy manaiky famelànkeloka sy fampihavanana ny ankamaroan'ny Kolombiana, na eo aza ny fanentanana momba ny fanabeazana arahana asa sy ireo fihaonambe natao ho an'ny adihevitra misokatra. Ataon'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina ary koa ny andrim-panjakana miadidy ny fanabeazana sy ny sehatra tsy miankina ireo fanentanana ireo. Mivantana indrindra amin'ny tanora any amin'ny faritra samihafa sy ny sarangam-piainana samihafa izany – anisan'izany ireo izay mahatsapa ho tsy miraika – ary ireo izay tsy voakasika mivantana tamin'ny ady, nefa efa namafazana izany hatrany am-parahatoka.
Na sarotra aza, dia mitohy mandroso ny asa ary mandeha araka ny voasoratra ao amin'ny fepetra fifanarahana farany. Nambaran‘ny Fiadidiana ny Repoblika tao amin'ny Twiter fa horaisin'ny UNICEF ireo latsaky ny 15 raona izay nandao ny laharan'ny FARC ho any aminà fonenana vonjimaika mandra-piverin'izy ireo amin'ny fiainana sivily. Noho izany, nandray ankizilahy sy ankizivavy 13 ny UNICEF tamin'ny 10 Septambra, ho toy ny ampahany amin'ny iraka nampanaovina ny Komity Iraisam-pirenen'ny Vokovoko Mena.
FANAMBARANA:| 10 Septambra. hanomboka ny dingana fanalàna ireo zaza tsy ampy taona avy amin'ny tobin'ny FARC
Feo avy amin'ny ady
Nandritra ny fivoriana nomanin'ny filoha teo aloha Álvaro Uribe Vélez (ilay mpanohitra voalohany ilay dingana hisian'ny fandriampahalemana), Leonard Rentería, mpitarika fikambanan'ny tanora avy any amin'ny seranantsambon'i Buenaventura ao amin'ny Departemantan'i Valle del Cauca, dia nilaza tamin-pahasahiana ho manohana ny “eny” amin'ny fifidianana sy ny fifanarahana hisian'ny fandriampahalemana, satria, araka ny filazany, dia tsy te-hanohy hiaina ao anaty ady:
[…] Ny faritanin'i Buenaventura izay nahitana taratry ny ady, izay namonoan'ny milisy tanora manodidina ny 12 tao amin'ny manodidina, tamin'ny taona 2005, fandripahana izay tohizantsika ny fahatsiarovana azy tao anatin'ny 12 na 20 taona […] Zava-dehibe ny fitsaharan'ny fijalian'ny fiarahamonina, ny tsy fitohizan'ny poizin'ny fankahalàna. Mino aho fa raha toa ka misy zavatra mendrika antsika, dia ny manomboka mandeha mankany amin'ny famoronana fandriampahalemana. Tsy nahita fandriampahalemana ny faritra amin'i Buenaventura, satria nandidy ny tanora maro mba handrava ny tanàndehibe misy azy ny milisy, ny olona izay tsy afaka manao na inona na inona, fa zary nanaraka am-bokony ny rafitra fotsiny […]
Iza ireo miaramilan'ny FARC sy ny tafika Kolombiana? Mahantra, olona nampahantraina … satria ny zanaky ny mpanankarena tsy mandeha miady, amin'ny ady alehantsika […] maritiora mivantan'ny ady aho, ny disadisa mitam-piadiana, fa na teo aza izany, raha tsy maintsy manome ny tanako mba ho an'ireo mpamono olona, vonona aho ny hanao izany, satria mino ny famelànkeloka aho.
Fa misy ihany koa tanora hafa, izay tsy mbola voakasika mivantana tamin'ny ady, nefa koa mitady fandriampahalemana. Ohatra, José Antequera Guzmán izay naneho ny fanantenana tao amin'ny bilaoginy talohan'ny nanambaràna ny fiafaran'ny ady, rehefa nilaza izy hoe: :
Miteraka olana hafa ny vahaolana rehetra hamahàna olana iray, hoy ny mpikatroka Alinsky Saoly. Raha jerena amin'izay fomba fijery izay ihany ny zava-misy, tsy misy olona afaka manakana antsika tsy hankalazana amin'izao fotoana izao izay rehetra nanjò antsika tamin'io fotoana io. Androany aho, ambonin'ny zavatra rehetra, dia mahatsiaro fa isanandro isika dia lasa firenena manirery bebe kokoa hatrany; fa isanandro dia lasa toa tsy vahiny amintsika i Kolombia.
Ary ao amin'ny fanambaràny farany, dia nolazainy ny fironany ho amin'ny fifidianana ny “eny”:
Mifidiana Eny ary atombohy dieny izao ny fandriampahalemana na manomana ny tenanao mba hametraka ny lohanao sy ny lohan'ny zanakao ho ao anatin'ny fisalasalana sy ny ady hafa indray!
Fanohanana iraisam-pirenena fo an'ilay dingana
Tsy voatery hamakivaky io lalana ho amin'ny fandriampahalemana io irery i Kolombia, ary ny fotoana taorian'ny ady dia ho arahan'ny iraisam-pirenena maso amin'ny alalan'ny Komity ho Fampiharana, Fanarahana maso sy Fanamarinana ny Fifanarahana Farany hisian'ny Fandriampahalemanea ary ny Fandravonana ny Disadisa. Hahazo ny fanampian'ny Firenena Mikambana koa izany, tsy noho ny asa fanarahana maso ara-politika fotsiny ihany, fa koa amin'ny fitohizan'ny fandaharanasany ho fampandrosoana, toy ny Tànana ho an'ny Fandriampahalemana , tetikasa iray manampy tanora mpianatry ny anjerimanontolo izay nanomboka niaraka tamin'ny fisainana mandrakariva ao an-doha ao ny Kolombia taorian'ny ady.
Manohy ny asa ho an'ny taranaka hoavy ireo Fikambanana iraisampirenena hafa, toy ny nitranga tamin'ny fikambanana Espaniola ‘Help in Action Fanampiana Mihetsika’, izay nanamafy ny fanohanany an'ireo latsaky ny 18 taona mandritra ny vanim-potoana taorian'ny ady. Ohatra, lazain'ilay fikambanana ireo loza mety mbola hamely ny tanora any ambanivohitra:
Anisan'ny asa famonoana izay misy fiantraikany amin'izy ireo indrindra, no ahitana ny fandraisana mpiasa, lasa kamboty vokatry ny disadisa mitam-piadiana, famindràn-toerana an-tery, fanjavonana an-terisetra, fakàna an-keriny, tradoza nipoahan'ny vanja (mines anti-personnel)(APM), fitaovam-piadiana tsy nipoaka (UXO), na zava-mipoaka noforonina an-kamehana( IED), vono-olona, famonoana faobe, fampidirana am-ponja, ny herisetra ara-nofo, fanitsakitsahana ny zo mikasika ny fampianarana sy ny fahasalamana, sy ny maro hafa.
Taorian'ny efa ho taompolo dimy taty aoriana, ho tompon'andraikitra amin'ny hoaviny ary hanana fahafahana mba hifidy lalàna vaovao ny tanora Kolombiana. Fa ny ray aman-drenin'ireo zaza tsy ampy taona izay tsy mbola afaka hifidy kosa dia manana andraikitra lehibe kokoa: sady manapa-kevitra ho an'ny tenany sy ny zanany amin'ny fifidianana manaraka.